Tag: idu ndú ntozu | Martech Zone
Kpido: ntozu ndu
Streak: Jikwaa Pipeline Ahịa Gị na Gmail Na CRM A Na-egosipụta
Ebe m nwere ezigbo aha na mgbe niile na-arụ ọrụ na saịtị m, okwu m, edemede m, ajụjụ ọnụ m, na azụmaahịa m… ọnụ ọgụgụ nke nzaghachi na nsonye m kwesịrị ịme na-esite na cracks. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na atụfuru m nnukwu ohere naanị n'ihi na anaghị m esoro atụmanya n'oge kwesịrị ekwesị. Na esemokwu, agbanyeghị, na mmetụ mmetụ m kwesịrị ịga iji chọta ogo ahụ
Ebumnuche 5 maka ndị ahịa B2B iji tinye Bots Na Usoro Mgbasa Ozi Digital Ha
Saturday, December 19, 2020 Saturday, December 19, 2020 Alex Chris
Internetntanetị na-akọwa bots ka ọ bụrụ ngwa ngwanrọ na-arụ ọrụ akpaghị aka maka ụlọ ọrụ na ịntanetị. Bots adịla adị ruo nwa oge ugbu a, ma si na ihe mbụ ha dịbu. A na-arụ ọrụ bọọlụ ugbu a ịrụ ọtụtụ ọrụ maka ọrụ dị iche iche. N'agbanyeghị ma anyị maara mgbanwe ma ọ bụ na ọ bụghị, bọọlụ bụ akụkụ dị mkpa nke ngwakọta ahịa ugbu a. Bots
8 Strategies Iji melite gị Sales Prospecting Irè
Wednesday, April 12, 2017 Tọzdee, Eprel 13, 2017 Douglas Karr
Na mgbede a, mụ na onye ọrụ ibe m na-apụ njem igwe kwụ otu ebe na n'etiti huffs na puffs anyị na-atụle usoro ahịa anyị maka azụmaahịa anyị. Anyị abụọ kwenyere na enweghị ịdọ aka ná ntị anyị tinyere n'ọrụ anyị na-egbochi ụlọ ọrụ anyị abụọ. Ngwaahịa sọftụwia ya na-adọta otu ụlọ ọrụ na ogo ya, yabụ na ọ marala ndị nwere atụmanya ya. Azụmaahịa m pere mpe, mana anyị lekwasịrị anya nke ukwuu
Kedu ihe bụ Chatbot? Ihe mere usoro ahia ahia gi ji acho ha
Fraịde, Ọgọstụ 12, 2016 Fraịde, Ọgọstụ 12, 2016 Douglas Karr
Anaghị m eme ọtụtụ amụma mgbe ọ bịara n'ọdịnihu nke teknụzụ, mana mgbe m hụrụ ọhụụ teknụzụ, a na m ahụkarị ikike dị egwu maka ndị ahịa. Mgbanwe nke ọgụgụ isi nke jikọtara ya na akụ na-enweghị njedebe nke bandwidth, ike nhazi, ebe nchekwa na oghere ga-etinye nkata ihu n'ihu n'etiti ndị ahịa. Kedu ihe bụ Chatbot? Mkparịta ụka nkata bụ mmemme kọmputa na-e mimomi mkparịta ụka na ndị mmadụ na-eji ọgụgụ isi. Ha nwere ike ịgbanwe
Demandbase + Jikọta: Chọpụta Ndị Na-eme Mkpebi na Akaụntụ Ebumnuche
Wednesday, April 27, 2016 Friday, April 29, 2016 Douglas Karr
Anyị na-aga n'ihu na-ede banyere uru nke Marketing-based Marketing (ABM). Ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe ABM bụ, anyị akọwaala ABM n’isiokwu ndị gara aga yana usoro ndị dị mkpa iji mejuputa atumatu ọma ABM. A ka nwere ihe ịma aka na mmejuputa ABM. Ọ bụ ezie na 97% nke ndị na-ere ahịa B2B kọrọ na ha na-agba ọsọ ugbu a ma ọ bụ na-eme atụmatụ mmemme ABM na 60% nke ndị ahịa na-eji ABM iji tọghata akaụntụ lekwasịrị anya iji duga ma ọ bụ ohere,